Sjöåsen - Stora Hammarsjöområdet | Shanyira Hultsfred
musha » pokugara » Dzimba » Sjöåsen - Stora Hammarsjöområdet
Anenge makiromita gumi kumadokero kweHultsfred ndiyo nzvimbo yekuchengetedza uye yekuredza nzvimbo Stora Hammarsjöområdet. Nzvimbo ine hunhu hwemurenje iyo inokoka kuhove kwakanaka, zvakasikwa zviitiko uye rugare rukuru. Sjöåsen iri pane dziva dhamu iro rakagovaniswa necottage Hamaråsen.
3 makamuri uye kitchenette, simba rezuva 12 volts yechiedza, LPG yefriji, chitofu neovheni. Pombi yeyadhi, chitofu chehuni, yakapusa WC fenicha yekunze uye bhengi. Tara yakakura inehurema hwehurema. Mikana yekurendesa sauna yakagovaniswa.
Mwaka wakaderera SEK 690 / zuva
Mwaka wepamusoro SEK 793 / zuva
Stensryd 1, 570 81 Järnforsen, Sweden